Chelsea Oo Xasuuq U Gaysatay Kooxda Red Bull Salzburg, Christian Pulisic Oo Ismuujiyay Iyo Arsenal Oo Dhaafi Kari Wayday Angers. - Gool24.Net
Chelsea Oo Xasuuq U Gaysatay Kooxda Red Bull Salzburg, Christian Pulisic Oo Ismuujiyay Iyo Arsenal Oo Dhaafi Kari Wayday Angers.
July 31, 2019 Mahamoud Batalaale
Arsenal ayaa barbaro la gashay kooxda reer France ee Angers iyada oo waliba Gunners gool looga hor maray balse ay soo laabasho ku heshay barbaraha ay gashay. Arsenal ayaa awoodi kari wayday in ay guul ka gaadho kooxda yar ee Angers ka hor inta ayna axada Camp Nou ku booqan kooxda Barcelona.
Kooxda Unai Emery ee Arsenal ayaa axada Camp Nou ku booqan doonta Barcelona ee kulanka koobka saaxiibtinimo ee Jaon Gamper Trophy kaas oo xagaagan lagu soo marti qaaday Gunners waxayna noqon doontaa kooxdii ugu horaysay ee Ingiriis ah ee koobkan ka soo qayb gasha 54 kii sanadood ee la qabanayay.
Laakiin wiilasha Unai Emery ayaan awood badan oo ciyaareed soo bandhigin kulankii Angers waxayna ka hor xili ciyaareedka cusub wajihi doonaan tartan adag oo ay Barcelona kulankan kula ciyaari doonaan.
Kooxda Angers ayaa daqiiqadii 13 aad dhalisay goolka ay Arsenal kaga naxsadeen kaas oo uu saxiixay Farid El Malali laakiin da’yarka Reiss Nelson ayaa daqiiqadii 50 aad ee qaybtii labaad ee ciyaarta kooxdiisa Gunners guuldarada ka badbaadiyay.
Dhinaca kale Chelsea ayaa xasuuq wayn u gaysatay kooxda Red Bull Salzburg iyada oo Frank Lampard uu sii wado diyaar garowga fiican ee uu kooxdiisa Blues ugu diyaarinayo xili ciyaareedka cusub.
Saxiixa cusub ee Christian Pulisic ayaa kulankan si cajiib ah iskugu muujiyay isaga oo laba gool u saxiixay kooxdiisa Blues wuxuuna ahaa bandhig ay jeclaysteen taageerayaasha Chelsea iyo waliba Lampard.
Christian Pulisic ayaa goolka furitaanka ee kooxdiisa Chelsea dhaliyay daqiiqadii 20 aad laakiin Ross Barkley oo isna si wayn iskugu muujiyay Lampard ayaa goolka labaad raaciyay isla daqiiqadii 23 aad ee qaybtii hore ee ciyaarta.
Laakiin Christian Pulisic oo labadan gool ku lug lahaa ayaa goolka saddexaad ee kooxdiisa Chelsea dhaliyay daqiiqadii 28 aad taas oo keentay in Blues ay hogaanka 3-0 ku qabtay iyada oo aan la gaadhin 30 kii daqiiqo ee ciyaarta ugu horeeyay.
Kooxda Red Bull Salzburg ayaa gool keensatay daqiiqadii 50 aad ee qaybtii labaad ee ciyaarta kaas oo uu dhaliyay Jerome Onguene laakiin Pedro Rodriguez ayaa daqiiqadii 57 aad jawaab bixiyay isaga oo dhaliyay goolka afraad ee Blues.
Laakiin kooxda Red Bull Salzburg ayaa goolkeeda labaad oo rekoodhe ahaa keensatay daqiiqadii 85 aad ee dhamaadkii ciyaarta waxaana goolkan u saxiixay Minamino waxayna ciyaartu noqotay 4-2 ay wali Blues laba gool hogaanka ku haysay.
Daqiiqadii 88 aad Michy Batshuayi ayaa kooxdiisa Chelsea u dhaliyay goolka shanaad ee ay ku sii niyadjabiyeen kooxda goolasha iska soo yaraysay ee Red Bull Salzburg wuxuuna xidiga reer Belgium ka mid noqday gool dhaliyaasha kulankan.
Ugu danbayn ciyaarta ayaa ku dhamaatay 5-2 ay Chelsea guul wayn ku gaadhay waxayna hadda kooxda Lampard isha ku haysaa kulanka Borussia M.Glabach ee ay axada la ciyaari doonaan ka hor inta ayna xili ciyaareedka cusub bilaaban.
5 3 ayey ciyaartu ku dhamatay